२ दिनपछि काठमाडौं उपत्यकामा नि’षेधाज्ञा खुकुलो हुने, यस्तो हुन्छ अबको नि’षेधाज्ञाका मोडालिटी, हुने छ निकै सहज ! | समाचार
June 1, 2021 June 1, 2021 NepstokLeaveaComment on २ दिनपछि काठमाडौं उपत्यकामा नि’षेधाज्ञा खुकुलो हुने, यस्तो हुन्छ अबको नि’षेधाज्ञाका मोडालिटी, हुने छ निकै सहज !
काठमाडौँ । सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फै लिएसँगै यसको रोकथाम तथा नि यन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको एक महिना पुगेको छ । सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर जेठ अन्तिमसम्म नि षेधाज्ञा थप्ने तयारीमा अधिकारीहरू लागेका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वैशाख १६ देखि उपत्यकामा नि षेधाज्ञा जारी गरेका हुन् । सो अवधिमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै करिब ३३ हजार सवारी साधन र एक हजार आठ सय जनालाई ‘होल्ड’ गरिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक र अन्य गरी करिब पाँच हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । उपत्यका प्रवेशको सात नाकासहित पाँच सय स्थानमा नियमित जाँच चौकी स्थापना गरिएको छ । निषेधाज्ञा उ ल्लङ्घन गर्नेवि रुद्ध ‘होल्ड’ का रबाहीअन्तर्गत सवारी साधनको हकमा साँझ ६ बजेसम्म र सर्वसाधारणलाई आधा घण्टा सडकमै उभ्याई सम्झाइबुझाइ गरी फर्काइँदै आएको छ । तर, पछिल्लो पटक कोभिड–१९ सङ्क्रमण व्यवस्था अध्यादेश जारीपछि ज रिवाना तथा कै द स जायको तयारी गरिएको छ ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले पहिलो तीन हप्ताको नि षेधाज्ञामा कोरोना सङ्क्रमण न घटेपछि चौथो पटक थप क डाइ गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । सोही र णनीतिअनुसार खाद्य, थोक तथा किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको उनको दाबी छ ।
यसै क्रममा आज काठमाडौंका सिडिओ कालिप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका सिडिओ प्रेम प्रसाद भट्टराई र ललितपुरका सिडिओ ढुण्डीप्रसाद निरौला सहभागी बैठकले निषेधाज्ञाका मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
उपत्यकामा जेठ १४ बाट बन्द गरिएको किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर खुल्ला गर्ने तयारी गरिएको छ । सार्वजनिक निर्माण पनि खुल्ला गर्ने प्रशासनको तयारी छ । आज अपरान्ह बस्ने उपत्यकाका तीनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
अहिलेको निषेधाज्ञा जेठ २० गते मध्यरातसम्म कायमै छ । निषेधाज्ञालाई क डाइ तुल्याउने जानकारी दिँदै प्रजिअ पराजुलीले आज बस्ने बैठकले थप निर्णय गर्न सक्ने समेत बताए ।
कतिपय विज्ञले समेत संक्रमण दर घटेकाले असारबाट निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न सकिने सुझाएका छन्। निषेधाज्ञालाई लम्बाइराख्दा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन कठिन हुने भन्दै संक्रमणलाई नि यन्त्रण गर्दै निषेधाज्ञालाई समेत खुकुलो पार्दै लानुपर्ने उनीहरूको राय छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा हाल संक्रमण दर केही घ टेको देखिन्छ । तर कतिपयले परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमितको संख्या पनि कम भएको बताउने गरेका छन् ।
म हामारी नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प नि षेधाज्ञा नै भएकाले कडाइ गर्नु परेको भनाइ उनको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्रतिदिन घट्नु नै नि षेधाज्ञाको प्रभावकारिता भएको बुझाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीको छ । केही दिनयता निषेधाज्ञा थप क डा बनाइँदा काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा घटेको तथ्याङ्क सुनाउँदै उनले भने, “सङ्क्रमितको सम्पर्क तथा भीडबाट टाढा बस्नु नै जोगिने उपयुक्त विकल्प रहेछ ।”
त्यस्तै महानगरीय प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरिबहादुर पालले सरकारको निर्णयअनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कुनै कमी हुन नदिएको बताए ।